N’ehihie a, m gara ileta nwa m nwanyị n’ọfịs ya (kedu ka nna m si ajụ oyi?). M kwụsịrị n'ụlọ ahịa ahụ n'okporo ámá, The Fresh Market ma bulie ọmarịcha ifuru ndokwa maka tebụl ya na ụfọdụ ọgwụgwọ maka ndị ọrụ ebe ahụ. Mgbe m lere, m blown pụọ… etinyere m EMV kaadị akwụmụgwọ na ọ na-arụ ọrụ fọrọ nke nta ozugbo. Ọ bụ ihe kachasị ọsọ m hụtụrụla ebe ndenye ọpụpụ na-enyere aka
Chaị… mgbe ị na-eche ihe niile raara onwe ya nye na dabere ngwaike maka ọdịnala magnetik nkeewa akara kaadị, nke ahụ bụ a ton nke akụrụngwa na-efu si n'ebe dochie. Otú ọ dị, n'ime afọ ole na ole sochirinụ, nke ahụ bụ kpọmkwem ihe ga-eme! Kaadị akwụmụgwọ ọdịnala na-apụ. O were hacking nke 70 nde Target kaadị akwụmụgwọ n'oge oge ezumike 2013 iji mee ka ndị Congress gbahapụ kaadị magnetik na-enweghị nchebe.